Home Wararka Maxaa dhaliyay gadoodka Ciidanka Galmudug ee ku sugan Gobolka Mudug?
Maxaa dhaliyay gadoodka Ciidanka Galmudug ee ku sugan Gobolka Mudug?
Waxaa gadooday Ciidanka Dowlad Goboleedka Galmudug ee ku sugnaa Gobolka Mudug. Ciidanka ayaa gabi ahaanba joojiyay howlihii ay u xilsaarnaayeen. Waxaa jira warar sheegaya in ay gadoodka ciidanka uu la xiriiro iscasilaada wasiirka Aminga ee Galmudug Axmad Macali Fiqi. Wasiirka ayaa shalay iska-casilay golaha wasiirada Galmudug.
Dhanka kale, wasiirka Warfaafinta DG Galmudug Axmed Shire Falagle oo la hadlay VOA ayaa sheegay in Maamulkiisa uu diiradda saarayo sugidda Amniga, Doorashooyinka iyo dhaqdhaqaaqyada Ciidan ee ka jira Deegaannada Dowlad-Goboleedkaas.
Axmed Falagle waxa uu kala fogeeyay wararka la isla xiriirinayo ee ah Ciidanka Gadoodka ka sameeyay Gobolka Mudug & Is casilaadda Wasiirkii Amniga DG Galmudug sida uu hadalka u dhigay Wasiir Falagle.
“Gadoodka Ciidanka lug kuma laha is casilaadda Wasiirkii Amniga, balse gadoodkoodu waxa uu salka ku hayaa mushaarka oo kasoo daahay, xalkooda ayaa la wadaa si loo siiyo xuquuqdooda” ayuu yiri Wasiir Falagle.
Wasiirka Warfaafinta DG Galmudug ayaa dhanka kale tilmaamay in la kordhinayo dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab, arrimaha ciidanka ee taagan ay yihiin kuwo lagu xoojinayo xasiloonida sida uu hadalka u dhigay.
Golaha Wasiirada DG Galmudug oo uu shir Guddoomiyay Madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye Qoor-Qoorayaa diiradda lagu saaray Xaaladda guud ee Amniga & arrimaha Doorashooyinka sida lagu sheegay qoraal kulankaas kaddib sida ay shaacisay Madaxtooyada Galmudug.
Galmudug waxaa todobaad ka maqan gacantooda Degmada Guriceel ee Gobolka Galgaduud, 1-dii October 2021 oo ku beegneed Jimcihii Usbuucii hore waxaa qabsaday Ciidanka Ahlu sunna kaddib markii ciidanka Dowladda & Kuwa Galmudug ay isaga baxeen.